Mendrika ve ny palitao mafana? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Palitao bisikileta nafanaina - ny fomba fikirakirana
Palitao bisikileta nafanaina - ny fomba fikirakirana
Mendrika ve ny palitao mafana?
nypalitao mafanamety ho maivana sy malefaka, izay mety ho tombony ho an'ny asa sasany. Raha tsy mihetsika be ianao ary mangatsiaka be,mafanaakanjo mety ho mora raisina.
Miala tsiny fa mangatsiaka be eto Utah, tsy dia mangatsiaka loatra amin'ity ririnina ity, tena hafahafa - Janoary - Fa ny antony faharoa dia satria i Andre Cooper dia any New York City dia nangatsiaka be, nivoaka izy nividy $ 2900 akanjo mafana mafana - Manao ahoana ity hafanana ity? - Ny hafanana tiako hambara - Mivonto ve izany? - Mahatsiaro mafana be ity faritra ity amiko. - Tsy vola be izany, palitao fotsiny. - Herinaratra. - Avelao hasehoko anao ny fomba fiasa, azonao atao ny manokatra azy, manindry izany bokotra izany ianao, ny bip, ireto no fonon-tànana, miaraka amina fonon-tànana, tsy ataoko izao, bip.
Ny fotoana voalohany nampiasako ireo dia tamin'ny taon-dasa raha nandeha tamin'ny lalao playoff Patriots izahay. Nifanohitra tamin'ny Houston - Houston Texans tao Foxborough izy io ary tena tsara, tena nangatsiaka ary nampafana ahy ity zavatra ity, nihanafana ary avy eo afaka nanome tombana feno aho raha toa ka mandeha ny fonon-tanana, na mandeha ve ilay akanjo na mihazona azy mafana aho amin'ny 20 degre. Tapitra ny fotoana ary lany ny ranom-boaloboko.
Io dia naharitra hatramin'ny antsasaky ny sasany, ity ny batery, nongotako fotsiny izy, ary, indro, misy paosy kely ho azy, miafina ao anatiny, ny zavatra mahafinaritra momba ny bateria dia ny ahafahanao mameno ny findainao ihany koa. , manana seranana USB iray izy raha te hampiasa azy io amin'ny fomba. Miafina ao anaty palitao fotsiny izany ary manafana anao. Inona no ao amin'ity zavatra ity? Ahoana raha nomeko antsy fotsiny ianao, fa ianao ihany no manapaka ahy? - Tsia, mety aho.- Eto ato am-poko aho .- (glandy mahatsiravina) - Oh- Toy ny hoe, O tsia, ity dia hanakorontana.- Oh noah foko.- Oh- Eny, inona no nataoko lazao fa tsy misy lanezy eto Utah.
Eto Utah dia tsy mangatsiaka loatra amin'ity ririnina ity, fa hafahafa be. Miditra amin'ny palitao akanjo aho. (mandriatra lamba) Ka ahoana no anafanana azy? Tariby vitsivitsy fotsiny, ahoana ny hafanan'ny tariby? Oh, oh, azoko tsara eto hitanao ity faritra fotsy ity, toy ny, ny coil rehetra ao.
Heveriko fa tsy maintsy miditra ao isika, heveriko fa mihazakazaka ao ireo tariby. (tsofy) - Aza- raiso amin'ny tarehiko izany - ary mahasosotra, okay, okay. Tokony hipetraka aho.- Eny, mipetraha, hiasa ao aho.- Oh, tsy dia mahafaly ahy izany. - Very hevitra aho- Whoa- Mazava ny lohako.- Mora ny lohanao.- Eny.- lesona amin'ny fiainana avy any Lincoln.- Aza atao mafy loatra ny manaparitaka izany zavatra izany sao ho reraka sy harary ianao .- Amin'ity faritra dia tsapany fa be dia be ny zavatra ao anatiny rehefa esoriko ity, iray karazana volo volo mainty.
Izay no toherintsika eto, ry havana. Manana ny entana hatraiza hatraiza izahay, na dia eto aza dia toy ny zavaboary bitika kely izy ireo - mila fantatrao izay ao anatiny. (Mozika manimba) (tsofina) - aza gaga, tadidio ny lesona, lesona mandritra ny fiainana miaraka amin'i lincoln azonao adino izany.
Efa nanadino ny lesona fianaranao manokana ianao. Heveriko fa tsy maintsy manao zavatra tsara kokoa isika eto raha hanao asa misokatra, hijerena an'io satria tamin'ity session iray ity dia tsy hitako ilay izy dia tsy nahita coil vy aho. (Grunts) - Na aiza na aiza ity zavatra ity. - Mila fanampiana ve ianao amin'ny famoahana an'io? - Eny, andao hojerentsika. (Puffs) - Tsia, tsia, tsia, tsia, nahoana, na aiza na aiza. (mitsoka mafy) - Tsy afaka manamarina na inona na inona ao anaty palitao afa-tsy ity iray ity. (mikiakiaka ny zazalahy) - Andao hihemotra isika.
Tsy dia tsara. (rovitra sy rovitra) (mozika elektronika) (tsofina) - Ie, tsofafao izany mba hahafahanay mahita izay hitantsika - Ao am-bavoroko io - Eh, be dia be ny booger. (Hip-Hop Beat) Izay zavatra mainty hitantsika teto - Mahafinaritra, toa mifikitra, mifikitra ve? - Tsia, plastika fotsiny io, plastika fotsiny eo aminy - Oh, toa hafitsokosoko izany .- Ahoana izany? Na izany aza, misy zavatra volo mahaforona ny hafanana.
Heveriko fa nohamafisinay fa ireo kofehin'ny volo ireo no mahatonga ny palitao elektrika - Toy ny volo matevina.
ny fomba fanamboarana bisikileta
Tsy azoko - Heveriko fa manana fifanarahana amin'ny hidim-pitiavana izy ireo. Mihevitra ianao fa omena olona tsara izany, fa napetrany tao anaty palitao ireo.- Okay.- Tsy fantatrao akory izany? - Heveriko fa tsia, tsia.- Tsia.
Okay, mety tsy vazivazy tsara izany. Ity ny paosy apetranao amin'ny bateria ary ity no charger kely. Io ilay bateria, nataon'izy ireo ilay famolahana kely ary napetrany ivelany ilay sarona fingotra kely.
Ka eto no manomboka, aiza ny antsy? Aza esorina amiko ny antsy ahy. ♪ Tapaho ny fofonaiko ♪ - Misy zavatra mahaliana anao manana an'io kely io, toa ny Micro-SD na izay tianao hiantsoana azy, tsy fantatro akory izay antsoin'io tariby io - zavatra USB? - Tsia, tsia, heveriko fa toy ny mic izany. Any amin'ny faran'ny palitao izay azonao apetraka amin'ny fonon-tànanao ary avy eo hafana koa ny fonon-tànanao.
Ity ny ao ambadiky ny palitao, zahao, hitanao ny paosy mafana eto- Wah-hoo- Ka nahazo, iray, roa teo alohan'io, roa teo alohan'io, roa ao ambadika, inona izany? Enina, misy enina.- Enina.- Tsy nampoiziko hoe hisy volo ao.
Andraso, te-hanosotra tarehy vitsivitsy aho. Andraso, andraso, andraso, aiza ny solomaso. Tsy maintsy misy solomaso eto.
dia menaka voa mainty ary menaka voa komina mainty mitovy
Okay Lincoln, haka rivotra be aho, apetaho haingana araka izay tratranao, apetaho eo daholo. Aza kosehina. (Hehy) - Ka raha mitady palitao mafana ianao dia hanampy rohy amin'izany izahay amin'ny famaritana.
Tsy misy tohana fa manampy be dia be amin'ny fiainanao ririnina. (Hehy) - Aza sokafana fotsiny.
Inona no palitao mafana mafana indrindra eny an-tsena?
Tsara indrindraAmin'ny ankapobeny: Ororo Slim FitPalitao manafana.Parka tsara indrindraStyle: OroroPalitao Parka nanafanamiaraka amin'ny insulated Thermolite.Tsara indrindraSoftshell ho an'ny lehilahy: akorandriaka malefaka an'ny PtahdusPalitao manafana.Tsara indrindraHooded Style: Ororo UnisexmafanaCapuchon.7 mart 2021
Mitady palitao mafana mafana tsara indrindra ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra ny palitao mafana mafana misy izahay ary hampitaha azy ireo eo anelanelan'ny vidiny sy ny fahombiazany, alohan'ny hanombohantsika ny lahatsoratray mamaritra ny palitao mafana tsara indrindra eny an-tsena, manana rohy amin'ny famaritana ho an'ny vokatra tsirairay voalaza izahay, ka zahao izay iray ao ny teti-bolanao. Manomboka amin'ny laharana 1 dia manana ny palitao miompy malefaka malefaka ORORO ho an'ny lehilahy izahay. Ho an'ireo izay mitady palitao mafana mafana avo lenta sy azo antoka dia io no safidinao tsara indrindra.
Vita amin'ny polyester 100%, manana fonosana manokana mahatonga azy io ho tantera-drano tanteraka. Ny hato-tanana sy ny vozon'akanjo akaiky akaiky mba hiarovana amin'ny rivotra sy ny rano Miaraka amin'ny sosona fanampiny, dia ho hitanao fa mafana izy io na dia tsy misy aza ny singa fanafanana, fa maivana kosa raha entina n'aiza n'aiza. Ny palitao dia tsy maharitra toy ny mety - fatiantoka polyester - ary ho hitanao fa ny habe dia somary lehibe, azo esorina amin'ny masinina manontolo (na dia ireo singa fanamafisana ao anatiny aza) ary misy safira tsy mahomby marobe, noho izany fa tsy misy atahorana ny fizaran-tany fohy rehefa misy ny akanjo.
Izy io dia safidy tsara tarehy sy tsara tarehy izay mendrika ny denaria tsirairay. Ny singa fanafanana dia ampandehanan'ny batterie 4400 mAh namboarina, 4 volt izay azo alaina amin'ny alàlan'ny tariby USB. Ny bateria dia manome fotoana maharitra 8 ora (amin'ny haavon'ny fanamainana ambany indrindra) ary afaka misafidy eo amin'ny sehatra efatra ianao - mora ny mifehy amin'ny alàlan'ny bokotra tafiditra ao anaty palitao.
Ny heaters dia tafiditra ao anaty tratra sy afovoan'ny lamosina ary mitazona ny vatanao ambony ho tsara sy mafana. Ny singa fanafanana dia miparitaka hatreto fa ny vatanao ambony iray manontolo dia afaka mahatsapa ny hafanana. Ny hany tokony hataonao dia ny mandrisika ary mangatsiaka! Manomboka amin'ny $ 135, ity no lafiny lafo kokoa amin'ny palitao, fa iray amin'ireo palitao mafana mafana indrindra amin'ny lisitray, manome ny fahamendrehana sy ny hafanana - ireo zavatra roa izay nankafizinao dia tadiavinao amin'ny palitao tsara! Amin'ny laharana 2 dia manana ny palitao DEWALT 20V Mavesatra Mavesatra t isika.
Ho an'ireo zazalahy mitady palitao maharitra izay haharitra mandritra ny ririnina maro dia azo antoka fa safidy ambony ny palitao manafana DeWalt. Miaraka amin'ny akorandriaka ivelany polyesterenika mandroaka ny rano, mahazaka betsaka (rehefa miasa ivelany na manao spaoro) ny palitao nefa tsy simba. Matevina ny akorandriaka ary mahazaka akanjo sy rovitra bebe kokoa noho ny palitao rehetra ao amin'ny lisitray.
Ny lehilahy miasa dia ho tian'ny paosy dimy misy zipper izay manome anao toerana malalaka ho an'ny fitaovanao sy ny gajinao rehetra. Ny palitao dia tsy lehibe hametra ny fahafahanao mihetsika, fa matevina kosa mba hanafanana anao amin'ny ririnina rehetra na dia maty aza ny fanafanana. Tsara ho an'ny matihanina! Ny palitao dia misy faritra fanamainana efatra (tratra sy lamosina), noho izany dia mizara ny hafanana amin'ny fomba mandaitra amin'ny vatanao ambony.
Ny singa fanafanana namboarina dia manify sy maivana mba tsy hamerana ny fahafahanao mihetsika. Ho an'ireo izay te-hiditra amin'ny akanjo mafana dia majika tanteraka ny preheat setting! Ny batterie natsofoka tao anaty palitao dia azo ampiasaina hamenoana ny telefaonao noho ireo seranan-tsambo USB 2. Mampalahelo fa ny fiainana bateria ananan'ity zazalahy ratsy ity dia tsy mitovy - tsy mampiasa afa-tsy 2-4 ora amin'ny toerana avo kokoa ianao na 6-7 amin'ny toerana avo indrindra. Mahantra ihany koa ny fiainana bateria, miaraka amin'ny fampiasana tsy tapaka 2 taona. alohan'ny tapaka.
Na izany aza, ny palitao dia mifanaraka amin'ny batterie 12 V sy 20 V DeWalt, ka azo soloina mora foana izy io raha misy tsy fahombiazana. Manomboka amin'ny $ 195 ka hatramin'ny $ 220, ity tokoa no lafiny lafo kokoa amin'ny zavatra. Na izany aza, ny palitao lava dia mateza ary mendrika ny vidiny, na dia mety mila miomana handany vola bebe kokoa amin'ny bateria vaovao miaraka amin'ny Bosch PSJ120XL-102 Soft Shell Heated Jacket aza ianao.
Ho an'ny lehilahy izay maniry fampiasa mihoatra ny fiasa dia ity no palitao ho anao. Mahafinaritra, maivana ary marevaka izy io ary manome anao fahalalahana mihetsika sy fahaizana maro. Mampalahelo fa midika izany fa misy insulation kely, noho izany dia tsy mety amin'ny ririnina mangatsiaka tena izy raha tsy misy singa fanafanana.
Tsy izy koa no maharitra sy mora tohina indrindra. Palitao tena ahazoana aina, noho ireo paosy lalina dimy izay manolotra habaka fitehirizana be dia be, ny USB 2- Fifandraisana amin'ny famahana ny findainao / fitaovana sy ny endrika tsy tantera-drano sy tantera-drivotra. Raha mitady palitao azonao atao mandritra ny ririnina malefaka (Kalifornia na Florida) ianao dia io no filanao tsara indrindra.
Ny heater ao anatiny dia mandeha amin'ny bateria 12 V Bosch ary manome ora maharitra 5 ora amin'ny toerana ambany indrindra na 2-3 ora amin'ny toerana avo indrindra. Ny bateria dia maharitra maharitra ary mety maharitra fiampangana an-jatony, saingy mihalefaka haingana (izay midika hoe betsaka kokoa) noho io fotoana fohy io. Ireo faritry ny hafanana telo (lamosina sy tratra) dia miantoka fa mafana hatrany ny vatanao ambony manontolo ary afaka mifamadika mora foana ianao eo anelanelan'ny haavon'ny hafanana 3.
Miaraka amin'ny charger USB, azonao atao ny mametraka ny palitao amin'ny rindrina mandritra ny fotoana iasanao hamenoana ny bateria, na raha foana ny baterinao dia soloinao bateria 12 V Bosch. Manomboka amin'ny $ 170 ka hatramin'ny $ 210, ity dia mora kely kokoa noho ny DeWaltjacket. Na dia tsy maharitra aza izy io, dia maivana kokoa sy be mpampiasa kokoa. tsy lazaina intsony ny lamaody be kokoa! Amin'ny toerana fahefatra dia manana ny palitao Knap Cordless Heated Jacket isika.
Raha mpandeha an-tongotra ianao izay mila mijanona mafana ao an-tokotany ivelany, ity no palitao ho anao. Vita amin'ny polyester 95% sy 5% elastane, hazavana, rivotra ary tantera-drano izy io ary mafana be na dia maty aza ny fanamainana. Ho hitanao fa mamorona hafanana tena tsara ao anaty toetr'andro masiaka izy io, ka mahatonga azy io ho palitao tonga lafatra hitafy ambanin'ny palitao mavo mavesatra na irery.
bisikileta no niteny
Palitao dia manify sy fanatanjahan-tena, miaraka amina endrika mamihina endrika izay mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny fitsangantsanganana, filasiana ary fanaovana fanatanjahan-tena eny ivelany - amin'ny ankapobeny izay hetsika rehetra mitaky fahalalahana mihetsika. Azo antoka fa ny safidy tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra! Ny heater an-trano dia ampandehanan'ny bateria lithium 4400 mAh, mora vidy ary manome fe-potoana mihazakazaka ambonimbony - hatramin'ny 8 ora amin'ny ambaratonga ambany indrindra.
Ny palitao dia tsy miaraka amin'ny torolàlana fampianarana, fa raha vao hitanao ny fomba famadihana ilay heater dia mora ny mifehy. Ireo faritra fanamafisana voaorina ao aloha sy aoriana dia manafana ny vatanao ambony manontolo, na dia mangatsiaka be aza. Amin'ny $ 130, ity no iray amin'ireo palitao mora indrindra ao amin'ny lisitray, ary iray amin'ireo mahazo aina indrindra koa.
Mendrika isaky ny denaria raha mikasa fitsangatsanganana amin'ny ririnina na fitsangatsanganana ianao. Ary farany amin'ny laharana fahadimy dia manana ny Lineran'ny Lehilahy Voahangy Voalohany. Ity palitao ity dia tapaka amin'ny famolavolana môtô mahazatra, miaraka amin'ny andilana fohy kokoa sy ny vozon'akanjo ambony kokoa mba hahafahanao mandeha amin'ny bisikiletanao Miorina mafana sy milamina vita amin'ny fitaovana tsy tantera-drano sy tantera-drivotra, miaraka amin'ny fanidiana fehin-tànana sy vozon'akanjo tsy ahazoana miditra ao anaty palitao raha mitaingina ianao.
Izy io dia mateza, maivana ary mahafinaritra ny endriny. Ny palitao dia miaraka am-paosin-zip ho an'ny fitehirizana ny gadget, ny lakile ary ny kojakoja anao, saingy afaka mihodina ao am-paosiny zip ihany izy io rehefa tsy ampiasaina. Mafana tampoka ny velaran-tany mafana rehefa alefa ny fanafanana, fa tsy miandany ny maripana rehefa maty ny fanafanana - mety tsara amin'ny fampiasana ny toetrandro rehetra.
Ny palitao dia miaraka amina singa fanafanana telo ary tsy ampiasan'ny bateria anatiny, fa ny batterin'ny moto anao. Ampifandraiso fotsiny ilay tariby tafiditra amin'ilay herinaratra 12 V an'ny moto anao ary ho foana ny heater raha mbola tafiditra ao ny palitao. Raha tsy lany mihitsy ny androm-piainana mandritra ny fitondrana fiara, dia ampidirina amin'ny fatiantoka tsy fanananao palitao ivelan'ny bisikiletanao izany. na famatsian-jiro.
Ny palitao koa dia miaraka amin'ny fonosana fonon-tànana mafana izay azonao atao ao anaty fonosana tariby mba hahazoana hery sy hafanana eo noho eo; amin'ny $ 200, somary lafo kokoa io, indrindra raha dinihina tsy manana bateria namboarina izy io. Ho an'ireo izay te-hitondra fiara mandritra ny ora maro, na izany aza, ny herinaratra mitohy amin'ny môtô no safidy voalohany! Ka io no akanjontsika mafana mafana indrindra amin'ny taona 2019. Manantena izahay fa nankafizinao izany.
Rehefa vitanao izany dia avelao ny toy izany ao amin'ilay lahatsoratra ary raha vaovao ianao eto dia kitiho ny bokotra famandrihana. Mandrapihaona amin'ny manaraka, mirary tontolo andro mahafinaritra.
Ratsy amin'ny fahasalamanao ve ny palitao mafana?
Palitao manafanadia azo antoka, na dia tsy mitombina aza ny fisalasalana amin'ny fiarovana azy ireo satria tsy mahomby ny rano sy ny herinaratra aara-pahasalamanafitambarana.nyfanaraha-maso ny mari-pana tafiditra ao anatinyny palitaotsy tantera-drano, ary afaka manasa koa ianaony palitaoamin'nynymilina fanasana raha mbolanyEsorina ny batterie USB alohan'ny hisasana.3 nov 2020 g.
Ny sasany amin'ireo akora simika ao amin'ity lapoaly tsy matevina ity dia mety hampidi-doza amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​ao anatin'izany ireo akora simika nampiasaina hanamboarana izany tao amin'ny orinasa, fa tsy midika akory izany hoe mahandro amin'ny lanjan'ny porofo ara-tsiansa sy ny hevitry ny manampahaizana eo an-tanana izany Ny zava-misy dia azo antoka ny mahandro, raha mbola tsy mafana be ianao ary na dia nanao aza ianao dia mety tsy ho olana lehibe izany raha tsy efa marary aretim-po na raha manana vorona ao aminy Proximity ianao, saingy Tsy ny vaovao tsara rehetra fa ny akora simika dia ampiasaina amin'ny dingam-pamokarana lapoaly toy izany dia mety amin'ny vatanao na aiza na aiza misy antsika, na mahandro amin'ny iray amin'ireo lapoaly ireo ianao na tsia Durham, North Carolina, Wodr. i nihuang dia postdoc ao amin'ny National Toxicology Program hey, miara-misakafo amin'i Teflon izy satria tena kamo aho ary tsy mahatsiaro mandoto ny lapoaly ary ao anaty vata fantsona fotsiny mba hamafana ireo zavatra eny amin'ny gorodona ireo mpahay siansa dia mitovy amin'izy ireo Inona ny Teflonwell? Teflon dia marika iray amin'ny sisa amin'ity lahatsoratra ity. Hiezaka ny hifandray amin'ny zavatra simika ao am-pon'ireo vilany rehetra ireo izahay.
PTFE eny ary izany dia rojo karbôna fotsiny miaraka amina fluorine betsaka manodidina azy ary mahatonga azy io hahatohitra ny fiatrehana karazana akora simika hafa na handrava ireo zavatra simika hafa na inona na inona izany noho ny fomba mahatonga ilay zavatra simika tena tsy miraikitra. manarona, ary izany no antony iray mahatonga ny fandrahoan-tsakafo miaraka amin'ireo mpanamboatra azy ireo hahatonga azy ireo ho azo antoka ary manomboka mihena izy ireo, saingy araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny firafitry ny simika dia mahatonga azy ireo tsy hihontsina. Ka raha mihinana sombin-tsakafo avy ao amin'ny vilany Teflon ianao, dia mety handalo izany na dia tsara tsy misy atahorana aza ny rafitra satria mieritreritra aho fa mety nihinana an'io sambo io aho. Ary koa, mpanamboatra maro no milaza aminao fa aza atao ao anaty vilia fanasana lovia ny vilany tsy an-tananao.
Nilaza i Huang fa mety tsy misy ifandraisany amin'ny filaminana izany. Azoko an-tsaina fa ny tena ahiahin'izy ireo dia ny mety ho rava haingana kokoa ny coating izay hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny lapoaly ataon'izy ireo. Mba hisorohana ny mpanjifa tsy afa-po dia mamporisika aho ny tsy hametraka ilay mpanasa vilia na mahazo vaovao rehefa avy nikiry izy ireo ary azoko antoka fa mamporisika ny olona hividy bebe kokoa maimaimpoana izany, hainao izany, folo taona lasa izay dia nanapa-kevitra aho fa hajanoko ny fikorontananako. meshes, izaho dia tena hahazo lafo lafo dia tsara ary hitsabo azy tsara, notoratako ara-bakiteny io tamin'ny fotoana voalohany nampiasako azy tsy nandrahoina, fikorisana sy fandefasana entana no tena nampihomehy azy ireo rehefa nanao zavatra simika tsy mety ianao mifikitra amin'ny zavatra sarotra ny manantona azy ireo amin'ny zavatra toy ny any ambanin'ny lapoaly Mino mafy aho fa ny fananako dia tokony hanompo ahy ary tsy tokony hanompo azy ireo aho Ny fomba fiasa tato anatin'ireo taona faramparany dia ny fividianana vilany tsy misy kitay mora vidy, ampiasao amin'ny fomba diso izy ireo ary soloo isaky ny taona vitsivitsy ny sarin'ny PTFE ao an-dakozia ary un d ity dia aretina tena tsy fahita firy antsoina hoe tazo polimana setroka.
Mety hitranga ny hafanana be loatra amin'ny lapoalyo. Hiresaka bebe kokoa momba izany isika ao anatin'ny iray minitra. Haingana haingana, avelao aho hisaotra ny mpanohana an'ity lahatsoratra ity manahoana fa mety misy olona mieritreritra Oh Adam Ragusa Mpahandro Internet mahafinaritra izy, ankehitriny dia tsy hampiasa serivisy fanaterana parcel intsony izy, tsy misy bandy noana aho karazana karazana rehetra , nalefany tany aminao ireto sakafom-sakafony ireto ary samy manana izay ilainao mba hanomanana lovia mahasalama matsiro ao anatin'ny antsasak'adiny amin'ny habetsany efa voafaritra mialoha, zahao ny baran'ny hotely, tavoahangy misy vinaingitra mahafinaritra ary azo averina tahaka ny ankamaroan'ny Tsotra sy mora arahana ireto torolalana ireto, saingy tena mahandro tokoa ary tena mahafaly ny valiny tsy misy afera tsy fahita firy aho matetika manana fantsom-pifandraisana hanomanana sakafo toradroa sy legioma nentim-paharazana, saingy misy fomba hafa manana kaloria tsy mihinan-kanina, mpinamana malala-tsaina , na dia ny asa tanana- Ny burger hellofresh dia malefaka, azonao atao ny mitazona azy tsotra na addigns toy ny mofo tongolo lay na tsindrin-tsakafo undhellofresh dia mora izao manomboka amin'ny $ 6.99 tadiavinao ity dia afaka manome sakafo valo maimaim-poana ho anao aho, izany ny $ 80 kely kokoa ho an'ny volana voalohany an'ny hellofresh dia mandehana any amin'ny hellofresh comm ary ampidiro ny kaody tolotra Adam na goose iya 80 fa 'mety tsara ilay famaritana ilay antsoina hoe Teflon dia nanidina io dia zavatra iray azo tanterahina amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo lapoaly ireo, Raha ataonao mafana be dia mafana izy ireo dia manomboka etona ary miala amin'ny lapoaly izy ireo ary avy eo raha miaina izany ianao dia afaka mahazo kely ny tazo gripa mamelombelona zavatra iray, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy mila iray na roa andro fotsiny ary avy eo dia izay.
Mino ny mpikaroka fa mety hampidi-doza ny fahasalamana sy / na ny olona mifoka setroka be dia be ny famonoana vorona, izany no zavatra resahina voalohany, toy ny hoe mihinana ianao fa mila mahazo an'io zavatra io alohan'ny hijerenanao ny gripa. avo lavitra noho ny fiheverako ny ankamaroan'ny olona amintsika? Ny fampiasana ireo mari-pana ireo izay handoro ny sakafonao dia ahitanao tsara ny fihenan'ny fanaintainana izay ampiasainao amin'ny maripana anaovana izany. Ny fandrobana toy izao dia sarin'ilay lapoaly izay tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo tranga vitsivitsy voarakitra an-tsoratra ao an-dakozia manome setroka polimer, tazo nitranga tamin'ny 2012 rehefa nametraka rano ny lehilahy iray 29 taona teo amin'ny vay ho an'ny paty fa adinony, tsaroany, nifoha izy 5 ora taty aoriana ary hitany feno setroka ny efitranony, noraisiny ny lapoaly, noentiny nankany amin'ilay fantsakana ary rehefa nandatsaka rano tao izy dia nisy etona nipoaka avy tao amin'ny ambonin'ilay Pan no natohany izy ka izany no karazana tranga ratsy indrindra tao an-dakozia ary inona no nanjo azy fa voan'ny tazo izy, nanana vatam-paty izy, somary tsy nahatsiaro fofonaina izy dia tsara kokoa ny ampitso ary ny andro fahatelo eto dia tabilao izay mampiseho tranga voarakitry ny tazo polimeran'ny setroka any Etazonia raha milaza izy fa efatra amin'ny 2012 dia tsy fohy ho an'ny 4000 izany hoe efatra sy dr. Nilaza i Huang fa ny ankamaroan'ireo tranga ireo dia tsy olona miasa ao an-dakozian'izy ireo fa ny olona miasa amin'ny ozinina anaovan'ny mpiasa ny firakofany ary tena miharihary izy ireo, noho izany dia any amin'ity faritra ity ny tranga misy anay ary misy tranga vitsivitsy amin'ny besinimaro, roa angamba? Heveriko fa izany dia voarakitra tsara tao anatin'ny folo taona lasa ka tsy fantatray fa tsy voarakitra izany.
Narary kely foana aho ary raha izaho no diso dia tsy azoko antoka fa hanampy roa sy roa amin'izay maripana tsy mora raikitra ny mari-pana, hoy ny ankamaroan'ny manam-pahaizana fa tsy mihoatra ny 500 degre Fahrenheit ianao fa tsy manomboka vaky izy ireo raha tsy amin'ny 570 Fahrenheit ary tena mandeha ihany izy ireo, hatramin'ny 662 degre Fahrenheit andao hanao fanandramana. Ny vilany tsy miraikitra dia mandeha eo ambanin'ny makarakara ary horefesiko ny mari-pana ao aminy miaraka amin'ilay thermometer infrared malalako, dia dia mila 20 minitra mahery hanatrarana ilay faritra mampidi-doza ary izany dia tsy misy poakaty miaraka amin'ny lapoaly b, raha manana sakafo ao ianao dia handray hafanana be dia be rehefa nanamboatra ny lasako pizza aho tamin'ny andro hafa tao anaty firakofako tsy miraikitra. Ilay sarona Tsy teo akaikin'ny faritra mampidi-doza ny sisin'ny lapoaly rehefa masaka teo amin'ilay burner ny pizza. Hafa kely ny tantara, azafady atodiko ity ho eo amin'ny faritra mampidi-doza ao anatin'ny 4 minitra ka aza mody afaka mampiasa hafanana be miaraka amin'ity lapoaly ity aho indraindray fa miaraka amina sakafo be dia be ao izay tsy te-hanafanana foana ianao, hoy ny iray Sear ny steak ary tsy ilaina izany satria raha mikaroka steak tsara ao anaty vilany mahazatra ianao dia tsy hijanona izany. Ity dia bebe kokoa ho an'ny sakafo matsiro toy ny atody ary na dia teo aza ireo fanandramana nataoko ireo faingana vao nanomboka be loatra ny lapoaly dia tsy vaky miharihary mihitsy izy ireo ary dr.
Mieritreritra i Huang fa mety tsy maintsy apetahoo eo amin'ny tarehinao ny tarehinao ary sempotra ireo setroka ireo sao harary ianao dieny mbola tsy vita. Nandritra ny taona maro dia nisy zavatra matotra kokoa mifanakalo hevitra momba ny mpamokatra mampiasa zavatra simika antsoina hoe PFOAP foa amin'ny fanaovana an'ity PFOA ity ho zavatra ratsy, mety ho karsinôniônina ary maharitra mandrakizay eo amin'ny tontolo iainana Betsaka ny fitoriana mahatafiditra olona miasa ao amin'ny Fiainana akaiky ho an'ireo orinasa, narary mafy, saingy tena misy faran'izay kely sisa tavela P FOA na zavatra simika portfolio hafa ao anaty vilany tsy misy volo, araka ny fantatrao, ketrona an'arivony ambany kokoa noho izay hita ao anaty rano na mihinana vaovao tsara toy izany dia tsy ao anaty vaovao ratsy no tsy itovizany na aiza na aiza misy azy ao anaty rano ary mety ao amin'ny ranao izao ny indostria dia nanala ny P FOA noho io antony io, saingy misy ny ahiahy amin'ny fizotran'ny simika ampiasain'izy ireo ankehitriny, ka izany ve no antony iray tsy hividianana vilany tsy hazo mba hialana amin'ny fanohanan'ny indostria mahatonga ireo Ch hampiditra fanafody simika amin'ny tontolo iainantsika fa ny zavatra tsy fonosana tsy hazo dia na aiza na aiza eto no tena ahalalanao azy ireo. ao anatiny ny tariby elektrika kosmetika popcorn kitapo floss nify amin'ny ankapobeny ny tasy rehetra na ny rano mahatohitra karipetra furnitureclothes ireo firakotra ireo dia na aiza na aiza ary koa ireo akora simika mety hampidi-doza ampiasaina hanamboarana izany dia zava-misy amin'ny fiainana maoderina na mahandro amin'ny iray amin'izy ireo ianao na tsia
Inona no fitaovana moto mafanafana tsara indrindra?
Hevitra tsara indrindra momba ny moto&tolo-kevitra2021
Tsara indrindraAmin'ny ankapobeny. GerbingMoto hafananaJacket Liner.
Tsara indrindraSarobidy SrivbmafanaVest.
Mafana tsara indrindraFonon-tànana. Heat Mpamonjy:Moto hafananaFonon-tànana.
Fanamarihana mendri-kaja. Heat VentureNafana ny motoJacket Liner.
Tsara indrindraPalitao vehivavy.
Maharitra hafiriana ny palitao mafana?
indrindrapalitao mafanaafakaFARANYeo anelanelan'ny adiny enina sy valo eo amin'ny toerana iva. Mety adiny roa na telo fotsiny no azonao atao amin'ny avo, ka mety ilaina ny mividy bateria na roa.
Afaka manao palitao mafana ao ambanin'ny palitao ve ianao?
Toy ny fenitraakanjo lava,akanjo mafanadia safidy mety indrindra amin'ny layering na lamaody amin'ny ririnina. Izy ireo dia mety amin'ny fanipazana ny flannel tianao indrindra namanao ambanin'akanjoririninaoakanjo. Na izany na tsia,akanjo mafana nohafanainafoanamafana ianaotsy ferana ny fivezivezenao ary tsy ampiana betsaka.22 Sep 2020
Mandra-pahoviana ny akanjo mafana nafanaina?
Ahoanalava no atao farany palitao mafana? indrindrapalitao mafanaafakaFARANYeo anelanelan'ny adiny enina sy valo eo amin'ny toerana iva. Mety adiny roa na telo fotsiny no azonao atao amin'ny avo, ka mety ilaina ny mividy bateria na roa.
Tsara ve ny palitao mafana Milwaukee?
izanypalitaodia vita tsara, manify sy maivana, nefa mafana be rehefa ampiasan'ny tenany manokana na tsy misy ny heater. Miakatra haingana ny bateria ary maharitra ora maro. Somary lehibe kokoa noho ny tiako ny bateria, saingy apetraka amin'ny sisiny anaty paosy misaraka, ary tsy manelingelina azy na dia mipetraka aza.
Mampiasa herinaratra be ve ny lamba firakotra mafana?
Mampiasa herinaratra betsaka ve ny lamba firakotra elektrika? ANKEHITRINYlamba firakotra herinaratradia miorina amin'ny tariby karbaona manify izay mahomby amin'ny angovo. Ny fanjifana angovo dia miankina amin'ny wattage misy azy, matetika eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 115 watt. Raha monina any Etazonia ianao dia mety ampangaina amin'ny 13 cents isaky ny kWh.8 apr 2021
Iza no mampafana an'i Harley?
GerbingmafanaAkanjo: ny mpitarika aoGear nafanainaTeknolojia nanomboka tamin'ny 1975.
tsiro clif fisotroana
Ahoana no fiasan'ny Harley fitaovam-piadiana mafana?
Ny hafanana hatreo amin'ny vozona dia omen'ny fandaharana mialohahafananafanovana voafantina miaraka amin'ny fanaraha-maso tsy misy tariby amin'ny tanana. Fanaraha-maso tsy misy tariby miaraka amin'nypalitaono anaovana ny hatotan-tanana apalitaotanany ary ampiasaina hifehezanahafananafamafana amin'ny tsindrio rantsan-tanana fotsiny.29 feb 2016
Iza no palitao mafana tsara indrindra ho an'ny moto?
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, ny Venture Heat Motorcy Heated Jacket dia azo antoka fa ny tolo-kevitray ho mpitaingina palitao môtô hafanaina tsara indrindra hitazomana anao ho mafana mandritra ireo volana mangatsiaka mitaingina ireo. Ny Gerbing Heated Jacket Liner dia safidy tsara hafa raha mitady milina palitao môtô mafana ianao hitafy eo ambanin'ny palitao mitainginao.
Inona no mahatonga ny palitao mafana ho palitao fanafanana?
Natao ho toy ny palitao fanafanana an-tanàn-dehibe izay afaka manitsy ny maripana satria miova ny toe-javatra nefa tsy mila mitondra atin-doha. Ireo singa manafana napetraka eo amin'ny lafiny stratejika dia mankasitraka ny softshell ivelany mafana mba tsy hivoahan'ny rivotra sy hamandrihana ny hafanana hahafahanao mankafy ny any ivelany amin'ity ririnina ity. Ho tianao ny hafanana atolotray an'ity palitao ity!
Fa maninona no mila valizy palitao môtô mafana ianao?
Ny akanjo vita amin'ny palitao mafana toy ity dia natao hampafana hatrany ny fotony mba hahafahanao mitaingina hatrany nefa tsy mangovitra na mijaly amin'ny hatsiaka. Io palitao môtô mafana io dia entin'ny baterin'ny moto anao. Izy io aza dia miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra tsy misy tariby izay azonao ampiasaina hivezivezy eo anelanelan'ny hafanana ambany sy antonony ary avo.
Kodiarana famantarana - mitady vahaolana
Tsara ve ny kodiarana famantarana? Token dia namokatra kitapo tena tsara nandritra ny taona maro ary tsy misy ankanavaka ny kodiarana Prime Ventous Carbon Disc Road. Ny kalitaon'ny fananganana dia tena tsara, tsara tarehy izy ireo, milalao tsara ary manana lanja tsara ihany koa.
marina marina ny garmin gps
Fahamarinana hafainganam-pandeha Garmin gps - ny fomba fiatrehana
Marina ve ny hafainganam-pandehan'ny Garmin GPS? Ny Garmin dia ho marimarina kokoa indrindra amin'ireo tarika niova fo. Ireo mpamaky haingam-pandeha dia mamaky teny avo hanombohana ary ny fanodikodinana ny haben'ny kodiarana dia hanary azy. speedometers dia saika diso foana. Fahadisoana no naorin'izy ireo ary famakiana avo lenta mba tsy hahazoanao tapakila mandeha haingana.
biby ho sakafo
Biby toy ny sakafo - ny fomba hiatrehana
Tokony hataon'ny olombelona sakafo ve ny biby? Ny olombelona dia tsy mila filàna biolojika na sakafo mahavelona na hena biby. Rehefa mamono biby hafa hohanina ny biby dia manao araka izay tokony hataony mba ho velona; Tsy manan-tsafidy izy ireo amin'izany. Tsy misy fitoviana hita eo amin'ny natiora ho an'ny fahavoazana lehibe ataontsika amin'ny biby fotsiny ho an'ny fahafinaretana.
fiovan'ny maty tsy maty
Fiovan'ny Deadlift - Boky Torolàlana feno
Inona no fiovana mety maty farany? Ny 5 Best Deadlift VariationsRack. Ny fisintomana dia tsy misy afa-tsy ny famonoana maty mahazatra miaraka amin'ny bara avo kely avy amin'ny tany. Famoahana maty tampoka Sumo. Famonoana olona tsy mety maty. Famerenan-tena romantika. Kettlebell sumo maty maty.
fanamboarana kodiarana tsy misy tubeless
Fanamboarana kodiarana tsy misy rano - fanontaniana sy valiny voatanisa
Fa maninona ny kodiarako tsy manana tubes no mandeha fisaka? Misy antony telo lehibe mahatonga ny «tsy fahombiazana» tsy misy fantsona: ny sisin'ny kasety dia diso tsara na simba. tsy mipetraka tsara ny kodiarana.6 июл. 2020 г.
mpitari-dalana skotisma zazalahy
Torolàlana momba ny skotisma zazalahy - vahaolana azo ampiharina
Inona ilay boky torolàlana ho an'ny skoto zazalahy ankehitriny? Boky Torolàlana ho an'ny skotista BSA, fanontana faha-14 Vaovao nohavaozina, ity Boky Torolàlana ho an'ny skotisma BSA fanontana faha-14 ity dia mbola boky azo alefa isaky ny skotisma. Misy dikanteny roa: ny Skoto BSA Handbook for Girls ary ny Skoto BSA Handbook for Boys.